कसरी पुग्यो ब्रिट्नी र उनको ‘लिगल गार्जियन’ विवाद अदालतमा ? | प्रदेश पालिका
गृहपृष्ठ कला/संस्कृति कसरी पुग्यो ब्रिट्नी र उनको ‘लिगल गार्जियन’ विवाद अदालतमा ?
कसरी पुग्यो ब्रिट्नी र उनको ‘लिगल गार्जियन’ विवाद अदालतमा ?
१४ असार २०७८, सोमबार ०८:४०
विश्वप्रसिद्ध पप गायिका ब्रिटनी स्पियर्स अहिले एक अनौठो झमेलामा छिन् । उनको यो झै–झमेलाले ग्ल्यामर दुनियाँमा खैलाबैला मच्चाएको छ ।
अमेरिका, लस एन्जल्सको एक अदालतमा ब्रिटनीले भनिन्, ‘मलाई जिन्दगी फिर्ता चाहियो ।’ आफ्नो जिन्दगीको १३ वर्ष लामो ‘अपमानजनक प्रबन्धन’को अन्त्य गर्ने लडाइमा रहेको उनले बताएकी छन् ।
भनिहालौं, आफ्नो गायकीले विश्वमै कहलिएकी यी गायिकाको जीवन आफ्नो इच्छा अनुसार चलिरहेको थिएन । कतिसम्म भने, आफूले आर्जन गरेका सम्पत्ति माथि पनि उनको अधिकार थिएन ।
अर्थात् उनले के गर्ने, के नगर्ने भन्ने सम्पूर्ण कुरामा अर्कै व्यक्तिको निर्णय लिनुपर्ने हुन्थ्यो ।
यी सबै कुराको अधिकार उनका ‘कानूनी पिता’लाई दिइएको थियो । यो कुन अवस्थामा हुन्छ भने, व्यक्ति जब मानसिक रुपमा बिरामी वा विक्षिप्त हुन्छन् । त्यसो भए के ब्रिटनी स्पियर्स मानसिक बिमारले ग्रस्त वा विक्षिप्त थिइन् ? के उनी आफ्नो निर्णय नै गर्न असमर्थ थिइन् ? उनी कठपुतली झैं अरुकै इशारा र आदेशमा नाचिरहेकी थिइन् ?
उनले भर्खरै मात्र सामाजिक सञ्जालमार्फत विश्वभर रहेका आफ्ना शुभचिन्तकलाई सम्बोधन गर्दै भनेकी छिन्, ‘म माफी चाहन्छु कि अहिलेसम्म मैले आफ्नो सबैकुरा ठीकठाक छ भनेर बहाना गरिरहेकी थिएँ । खासमा मेरो सबैकुरा ठीकठाक र राम्रो थिएन ।’ यसै सन्दर्भमा बीबीसीले ब्रिटनी स्पियर्सको झै–झमेलाबारे एक आलेख छापेको छ । प्रस्तुत छ त्यसको भावानुवाद :
विगत केही वर्षदेखि ब्रिटनीका लिगल गार्जियन (कानूनी रुपमा उनका अभिभावक)ले उनको करिअरको निर्णय लिंदै आएको छ । सन् २००८ मा ब्रिटनी मानसिक समस्याबाट ग्रस्त थिइन् । त्यही क्रममा अदालतले कन्जरभेटरसिप नामको एक प्रक्रियाबाट उनको रेखदेखका लागि कन्जरभेटर अर्थात् कानूनी अभिभावक नियुक्त गरेको थियो ।
अदालतले आफ्नो आदेशमा ब्रिटनीको सम्पति र उनको जिन्दगीको अहम् निर्णयको सम्पूर्ण हक कानूनी पिता जेमी स्पियर्सलाई दिएको थियो । तर, अहिले ब्रिटनीलाई यस किसिमको अभिभावकत्व मञ्जुर भएन । उनी यसबाट मुक्त हुने लडाइमा छिन् ।
अहिले विश्वभर रहेका ब्रिटनीका असंख्य शुभचिन्तकले ‘ह्यासट्याग फ्रि ब्रिटनी’ नामको एक अभियान नै सुरु गरेका छन् र ब्रिटनीलाई कानूनी पिताबाट मुक्त गराउनका लागि आवाज उठाइरहेका छन् । यसै वर्ष ब्रिटनीको जिन्दगी र उनको अभिभावकत्वलाई लिएर ‘फ्रेमिङ ब्रिटनी स्पियर्स’ नामको एक वृत्तचित्र सार्वजनिक भएको छ । यसै माध्यमबाट ब्रिटनीको असली दुःख सबैसामु पुगेको छ । खासमा उनी आफ्नो निजी जिन्दगीका लागि लामो समयदेखि कानूनी लडाइमा छिन् ।
शुक्रबार ब्रिटनी स्पियर्सले एक इन्स्टाग्राम पोस्ट गर्दै आफ्ना शुभचिन्तकसँग माफी मागेकी छिन् । यसो भन्दै, ‘अहिलेसम्म मैले देखावटी रुपमा सबैकुरा ठीकठाक छ भनिरहेकोमा म माफी चाहन्छु ।’ उनले आफ्नो आत्मसम्मानका कारण यस विषयमा कुनै कुरा नगरेको बताएकी छिन् ।
उनले लेखेकी छिन्, ‘यो मुद्दा म आफ्ना शुभचिन्तकको सामुन्ने ल्याइरहेकी छु । किनभने उनीहरुले यो नठानोस् कि मेरो जिन्दगीमा सबैकुरा राम्रो भइरहेको छ । ठीकठाक छ । यदि तपाईंहरुले मेरो बारेमा समाचार देख्नुभयो भने थाहा हुनेछ, मेरो जीवन ठीकठाक छैन ।’
के हो अभिभावकत्व कानून ?
कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो जिन्दगीका लागि उचित निर्णय लिन नसक्ने अवस्थामा स्थानीय अदालतले गार्जियनसिप कानून (यसलाई अमेरिकामा कन्जरभेटरसिप पनि भनिन्छ) को माध्यमबाट एक कानूनी अभिभावक तय गरिदिन्छ ।
अदालतको आदेशमा कानूनी अभिभावकले उक्त व्यक्तिका लागि सम्पूर्ण निर्णय गर्न सक्छन् । खासगरी मानसिक रुपले बिरामी र विक्षिप्त व्यक्तिका लागि अदालतले यस्तो फैसला गरिदिन्छ ।
ब्रिटनीको हकमा अभिभावकत्वलाई दुई हिस्सामा राखिएको छ । पहिलो उनको सम्पत्ति र पैसाको मामलामा । दोस्रो, उनको निजी जिन्दगीलाई लिएर । यही नयाँ कानूनी व्यवस्थाले गर्दा सन् २००८ बाट ब्रिटनीले आफ्नो पैसा एवं सम्पत्ति समेत आफ्नो मर्जीले उपभोग गर्नबाट वञ्चित थिइन् ।
सुरुवातमा यी दुवै कुराको अधिकार उनका कानूनी पिता जेमी स्पियर्सलाई थियो । तर सन् २०१९ मा उनले पनि आफ्नो स्वास्थ्य स्थितिको कारण आफ्नी छोरीको निजी निर्णय लिन असमर्थ रहेको बताइरहेका थिए ।
अन्ततः यो काम अस्थायी रुपमा एक पेशेवर (केयर प्रोफेशनल)लाई दिइयो । ब्रिटनीले उनलाई नै स्थायी रुपमा काम गर्न दिनका लागि अनुरोध गरे ।
तर, अदालतको गोपनीय दस्तावेजको आधारमा न्यूयोर्क टाइम्सले भनेको छ कि, ब्रिटनीले गार्जियनसिपको विरुद्ध गंभीर आरोप लगाएकी छिन्, तर यो कुरा मिडियामा उति धेरै चर्चा भएन । यस दस्तावेजबाट के थाहा हुन्छ भने ब्रिटनीले आफ्नो जिन्दगीको सामान्य निर्णय लिनबाट समेत वञ्चित छिन् । कोसँग डेट जाने वा आफ्नो भान्सा वा अलमारीको रंग कस्तो लगाउने भन्ने कुरामा समेत उनको मर्जी चल्दैन ।
सन् २०१६ मा अदालतका जाँचकर्ताले लेखे, ‘ब्रिटनीलाई लाग्छ कि गार्जियनसिप उनको विरुद्ध दमनकारी र नियन्त्रण गर्ने हतियार बन्यो ।’ रिपोर्ट अनुसार गार्जियनसिपका बारेमा ब्रिटनीले भनेकी थिइन्, ‘मेरो जिन्दगीमा हदभन्दा बढी नियन्त्रण भइरहेको छ ।’
नोभेम्बर २०२० मा आदलतले जेमी स्पियर्सलाई ब्रिटनीको अभिभावकबाट हटाउन अस्वीकार ग¥यो र बेसेमेयर ट्रस्ट नामको एक फाइनेन्सियल कम्पनीलाई उनको सम्पत्तिको मामलामा सहअभिभावक बनाइदियो ।
यसको एक महिनापछि अदालतले जेमी स्पियर्सलाई दिइएको गार्जियनसिप हक २०२१ सम्मलाई बढाइदियो ।
ब्रिटनीलाई अभिभावकको किन आवश्यक ?
सन् २००७ मा ब्रिटनीको व्यवहार एकदमै अनौठो गरी बदलियो । त्यही वर्ष ब्रिटनी र उनका पति केविन फेडेरलाइनबीच सम्बन्धविच्छेद भयो । यस कानूनी लडाइमा उनका दुवै बच्चा पाल्ने हक उनका पतिलाई दिइयो ।
त्यसपछि सार्वजनिक रुपमै यस्ता केही घटना भए, जसले ब्रिटनीको मानसिक स्वास्थ्यप्रति प्रश्न गर्न थालियो । एकपटक उनले आफ्नो कपाल सबै मुडिन्, अर्को पटक उनले छाताले एक फोटोग्राफरमाथि आक्रमण गरिन् ।
सन् २००८ मा मानसिक समस्याको मूल्यांकनपछि उनलाई अस्पताल भर्ना गरियो । त्यसबेला उनले आफ्नो छोरोलाई जान दिन मानिनन् र प्रहरीसँग उनको विवाद भयो । यतिबेलासम्म अस्थायी रुपमा उनको कानूनी अभिभावक नियुक्त गरिसकिएको थियो । तर, यस अन्तर्गत उनी के के कुराका हकदार थिए भनेर सार्वजनिक रुपमा भनिएन ।
कानूनी पिताको अभिभावकत्व रहँदा पनि ब्रिटनीको काममा कुनै कमी आएन । त्यसपालि उनले तीन एल्बम सार्वजनिक गरिन् । लास भेगास रेजिडेन्सीसँग कन्सर्टका लागि लामो अनुबन्ध गरिन् । उनी केही पटक टेलिभिजन शोमा देखिइन् । अमेरिकामा एक्स फ्याक्टर नामको शोमा निर्णायकको रुपमा पनि रहिन् ।
ब्रिटनीको कमाइसँग जोडिएको दस्तावेजको आधारमा विजनेस इनसाइडरमा एक रिपोर्ट छापिएको थियो । जसमा भनिएको थियो कि, २०१८ मा ब्रिटनीको कुल सम्पत्ति करीब ५ दशमलव ९ करोड डलर थियो । इन्टरटेनमेन्ट टुनाइटको रिपोर्ट अनुसार यस वर्ष ब्रिटनीले कानूनी लडाइँमा करीब ११ लाख डलर खर्च गरेकी थिइन् ।
के हो फ्रिब्रिटनी अभियान ?
न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार ह्यासट्याग फ्रिब्रिटनी शब्दको प्रयोग सन् २००९ मा पहिलो पटक गरिएको थियो । यसको सबैभन्दा पहिलो प्रयोग एक फ्यान वेबसाइटमा गरिएको थियो, जहाँ ब्रिटनीका शुभचिन्तक उनका लागि गार्जियनसिपको विरुद्धमा थिए ।
यसपछि त्यसको प्रयोग सन् २०१९ मा त्यसबेला गरियो जब लास भेगास रेजिडेन्सीसँग गरिएको आफ्नो अनुवन्ध बीचमै तोडेर ब्रिटनी एक मानसिक अस्पतालमा भर्ना भइन् । उनले भनेकी थिइन् कि आफ्ना पिताको लगातार खस्कँदो स्वास्थ्यको कारण उनमा मानसिक तनाव थपियो ।
यता ब्रिटनीका शुभचिन्तक भन्छन्, ब्रिटनीलाई गार्जियनसिपको व्यवस्था जबरजस्ती लादिएको हो । कतिले यस व्यवस्था विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान नै चलाए । अनि हजारौं संख्या पत्र ह्वाइट हाउसमा पठाउँदै अनुरोध गरियो, ब्रिटनीको यो गार्जियनसिप अन्त्य गरियोस् ।
यी सबै कुरामा ब्रिटनी चाहिं के भन्छिन् ?
ब्रिटनी स्पियर्सले केही वर्षसम्म यस अभियानलाई न समर्थन गरिन्, न विरोध । उनी चुपचाप रहिन् । उनको प्रयास के थियो भने अदालतको मुद्दा जे भए पनि अनलाइनमा देखिंदा खुसी देखिनुपर्छ ।
उनका केही प्रशंसकहरु भन्छन् कि उनले गोप्य सन्देशका लागि सामाजिक सञ्जालको सहारा लिइन् । जस्तो कि, आफूलाई सहयोग गर्न चाहनेहरुलाई उनले पहेंलो पोशाक लगाउन भनेकी थिइन् ।
यस वर्षको सुरुवातमा ब्रिटनीको वकिलले अदालतलाई अनुरोध गरेको थियो, गार्जियनसिपको बारेमा अदालतले ब्रिटनीको कुरा पनि सुनियोस् । तब लस एन्जल्समा भएको त्यस सुनुवाइका क्रममा ब्रिटनीले भनिन्, ‘हद भन्दा बढी नियन्त्रण गर्ने यस व्यवस्थाको अन्त्य गरियोस् । ताकि, उनले आफूले फेरी विवाह गर्न सकून् र बच्चा जन्माउन पाइयोस् ।’
अदालतलाई दिएको २० मिनेट लामो आफ्नो भावुक बयानमा ब्रिटनीले भनेकी छिन्, ‘म चाहन्छु कि यो गार्जियनसिपको व्यवस्था अन्त्य गरियोस् । र, यस मागको लागि मेरो मूल्यांकन नगरियोस् । मलाई पनि जिन्दगी जिउने हक छ ।’
ब्रिटनीको वयानपछि उनका पिताका वकिलले भनेका छन्, ‘उनका पितालाई यस कुरामा अपसोच छ कि उनकी छोरी दुःखी छिन् ।’
ब्रिटनीको जिन्दगीमा उतारचढाव
१६ वर्षको उमेरमा ब्रिटनी स्पियर्सले पहिलो पटक सफलताको स्वाद चाखिन् । आफ्नो डेब्यु गीत ‘बेबी वन मोर टाइम’ विश्व पाँच चार्जमा पहिलो पटक टप दश गीतमा एक बन्यो । सोही उमेरमा जहाँ एकातिर उनले विवादलाई जन्म दिइन्, अर्कोतर्फ ठूलो किशोर जमात उनका प्रशंसक भए ।
ब्रिटनीको निजी जिन्दगीमा पतिसँगको उनको लडाइ सतहमा देखियो । उनको सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको थियो । मिडियामा उनको बच्चाको बारेमा प्रश्नहरु गर्न थालियो । उनको मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा प्रश्नहरु गर्न थालियो । उनलाई के पनि आरोप लगाइयो भने उनी आमा हुनका लागि योग्य छैनन् ।
अस्पताल र पुनर्स्थापना केन्द्रको चक्कर काटेपछि ब्रिटनीका पिता जेमी स्पियर्स उनका कानूनी पिता बने । उनलाई ब्रिटनीको करियर, उनको सम्पत्ति र आर्थिक मामलाको निर्णय लिने अधिकार दिइयो । सुरुमा यो व्यवस्था कम समयका लागि थियो । तर, पछि अनिश्चितकालका लागि बढाइयो ।
भलै ब्रिटनीलाई आफ्नो जिन्दगीको निर्णय लिने हक थिएन । तर, उनले यो काम जारी राखिन् । एक पटक उनले आफ्नो छवि सुधार्ने प्रयास गरिन् । आफ्नो सातौं स्टुडियो एल्बमपछि केही शोमा गइन् । उनले एक कम्पनीसँग कन्सर्टका लागि चार वर्षको अनुबन्धन गरिन् ।
पिताको खराब स्वास्थ्यलाई कारण देखाउँदै ब्रिटनीले कामबाट विदा लिइन् । उनका पिताले पनि आफ्नो खराब स्वास्थ्यको कारण ब्रिटनीको अभिभावक बनिरहने कर्तव्यबाट छुट्टी लिन चाहेको बताए ।
ब्रिटनीले आफ्ना वकिललाई भनेकी थिइन् कि, उनी कानूनी पिताको माध्यमबाट आफ्नो सम्पूर्ण जिन्दगीको छिनोफानो गर्न चाहन्न । वकिलले भनेका छन्, ‘ब्रिटनीलाई आफ्नो पिताको डर छ । र, यदि उनको हातमा नियन्त्रण रहिरहने हो भने ब्रिटनी फेरि कहिल्यै स्टेजमा फर्कने छैनन् ।’
न्यूयोर्क टाइम्सले ब्रिटनीको सफलता र उनको करियरको उतारचढावलाई लिएर एक वृत्तचित्र बनायो । यसमा मिडियाले उनीसँग जुन व्यवहार गरेको थियो, त्यसबारे चर्चा गरेको थियो । यसै वृत्तचित्रपछि ब्रिटनीको निजी जिन्दगी र उनको गार्जियनसिपको बारेमा सर्वत्र चासो बढ्यो ।
Previous articleपुननिर्माणका इञ्जिनियर काममा फर्किने
Next articleमानिसलाई आक्रमण गर्ने चितुवालाई गोली हानी मारियो
दोहोरी गायिका दिलमाया सुनार आफ्नै डेरामा मृत फेला